नेपाली जनता र सरकारले मलाई पुन जिम्मेवारी दिइए पछाडि हट्दिन – कुलमान घिसिङ – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/नेपाली जनता र सरकारले मलाई पुन जिम्मेवारी दिइए पछाडि हट्दिन – कुलमान घिसिङ
नेपाली जनता र सरकारले मलाई पुन जिम्मेवारी दिइए पछाडि हट्दिन – कुलमान घिसिङ
1434minutes read
काठमाडौं -: नेपाल विद्युत प्रधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ्गको पहिलो कार्यकाल यही भदौ २९ गते सकिँदैछ । २०७३ साद भदौ २९ गतेबाट विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति भएसंँगै देश १८ घण्टाको लोडसेडिङ्गट मुक्त भएर विद्युत निर्यात गर्ने अवस्थामा सम्म पुगेको छ ।
यहो अवधिमा थुप्रै जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्ने ,उत्पादन बढाउने र कतिपय योजनाहरु सम्पन्न भएका छन त कतिपय योजना उत्पादन दिने तयारीमा छन । त्यति मात्रै होइन उनको कार्याकाल अघि प्राधिकरणको ३४ अर्ब संचित घाटाबाट उकासिएर अहिले प्राधिकरण अर्बौ नाफा कमाउन सफल भएको छ ।घिसिङ्गकै नेतृत्वमा रहँदै आएको प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७३—७४ देखि नाफा गर्न सुरु गरेको हो। त्यसपछि क्रमशः नाफा वृद्धि गर्दै आएको छ। जसअनुसार आव २०७४—७५ मा दुई अर्ब ८५ करोड, आव २०७५—७६ मा नौ अर्ब ८१ करोड र आव ७०७६—७७ मा हालसम्मकै उच्च रु. ११ अर्ब पाँच करोड रुपियाँ नाफामा रहेको छ।
तपाईको चार बर्षे कार्यकाल यही भदौ २९ गते सकिदैछ कस्तो लागिरहेको छ ?
कुनैपनि संस्थामा एउटै व्यक्ति सधै रहने भन्ने हुदैन । संभव पनि हुदैन । यो नियमित प्रक्रिया हो । यसकारणपनि मलाई मेरो कार्यकाल सकिदैछ भन्नेमा चिन्ता छैन । तर अधुरा योजनाहरु पुरा कहिले होलान । नेपाल आत्मनिर्भर भएर विद्युत निर्यात गर्ने मुलुक कहिले बन्छ भन्ने चिन्ता छ ।यसमा मैले गरेका मेरो नेतृत्वबाट भएका कामहरुबाट आम जनता खुशी हुनुहुन्छ । सन्तुष्ट हुनुहुन्छ । मैले एउटा सिष्टम बसाएको छु र हाम्रो टीमबाट आज देश लोडसेडिङ्ग मुक्त भएको छ । अब फेरी जनताहरु लोडसेडिङ्गको चपेटामा नपरुन भन्ने मेरो अपेक्षा छ । तर मलाई अरु कार्यालय संस्थाहरुबाट जसरी उच्च अधिकारीहरुले अवकाश लिन्छन । त्यही अनुभव भईरहेको छ ।
तपाईको कार्याकाल अघि कुनेपनि उच्चतहका अधिकारीलेहरुले गर्ननसकेको काम तपाईको पालामा भयो यो कसरी सम्भव भयो ?
कुनैपनि काममा सफल हुन त्यस भित्रको व्यवस्थापन बलियो र राम्रो हुनुपर्छ । अर्कोकुरा आफ्नो लक्ष्य, उद्धेश्य जिम्मेवारी के हो ? त्यसमा दृढविश्वास हुनुपर्छ । जलश्रोतको धनी देश हामी आफै त्यतिबेला चरम लोडसेडिङ्गको मारमा थियौ । नेपाली जनताले दुःख पाईरहेका थिए ।देशमा उद्योग कलकारखाना सबै धराशायी अवस्था थियो । नयांँ उद्योगधन्दामा लगानी गर्न कोही पनि तम्तयार थिएनन। म प्राधिकरण तल्लोस्तरको कर्मचारी देखि हालसम्म आउंँदा मैले थुप्रै अनुभव बटुलेको थिएँ । नशा नशामा मेरो शरीरमा विजुली बगिरहेको हुन्थ्यो । यस अवधिमा समस्या केहो र कमजोरी कहांँ छ भन्ने कुरा मैले पत्ता लगाईसकेको थिएंँ । अर्को कुरा ममा दृढ इच्छाशक्ति र अठोट थियो ।
जसरीपनि देशलाई लोडसेडिङ्गबाट मुक्त बनाउंँछु भन्ने । सबैभन्दा पहिले प्राधिकरणको व्यवस्थापन प्रणालीलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउंँदै गएँ । सबै मेरा कार्यालयका अधिकारी लगायतको टीम बनाएर लगें ।मेरो विचारमा कुनैपनि संस्थामा राइट मेन राइट प्लेस हुनुपर्छ भन्ने हो । जसका कारण पनि मलाई सफल मिल्यो भन्ने लाग्छ । सरकारबाट पनि सपोर्ट प्राप्त हुदै गयो जसका कारण मैले काठमाडौंलाई लोडसेडिङ्ग मुक्त बनाउन सफल भएंँ र क्रमश देशभर सबै ठाउंँ लोडसेडिङ्ग मुक्त गर्न सफल भयौं ।
यो बीचमा तपाईमा चुनौतिका चाङ्ग थिए होलान यसलाई कसरी समाधान गर्न सफल हुनुभयो ?
त्यतिबेला हाम्रो उत्पादननै कम थियो । त्यतिबेला जम्मा ३५० मेघावाट उत्पादन पनि थिएन । अर्कोतिर माग पनि बढ्दै जाने अवस्था थियो ।म आएलगत्तै पूर्वाधार निर्माणमा लाग्यौं । त्यतिबेला कैयो पावरप्लाण्ट बन्द थिए । यसलाई चालु गर्यौं । यहांँ उत्पादित विजुली सहीरुपमा उपभोक्ताले उपभोग गर्न पाएका थिएनौ । चुहावट लगायतका थुप्रै आन्तरिक समस्यालाई छिचोल्नु पक्कै पनि चुनौतिको बिषय थियो ।एक्कासी लोडसेडिङ्ग मुक्त गर्नसक्ने अवस्था थिएन । यसलाई क्रमश सुधार गर्नुपर्ने , सिष्टम कसरी विकास गर्दै जाने भन्ने मुख्य कुरा थियो । मेरो भिजन र अनवरत प्रयास मेहनतले गर्दा अहिले यो अवस्थामा आउन सफल भयौं । यहीं भएको रिसोर्सलाई व्यवस्थापनबाटनै अहिले लोडसेडिङ्ग सफल हुन सफल भएको हो ।
यो चारबर्षे तपाईको कार्याकाललाई कसरी आफ्नो मुल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
एकजना व्यक्तिले चाहेर मात्रै केही हुदैन ।यो सबै परिवर्तन सफल हुनु सामुहिक प्रयास हो । प्राधिकरण को दायित्व अनुसार हामीले त्यो दायित्व पुरा गरेका हौं । यहांँको व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी ढंगले चलाएका हौं । मेरो उद्धेश्य लोडेसेडिङ्ग अन्त्य गर्ने, विद्युत प्राधिकरण घाटामा गएकोलाई नाफामा ल्याउने र आन्तरिक उत्पादन गरेर खपत भएपछिको उत्पादनलाई निर्यात गर्नुथियो ।
यसका लागि ट्रान्समिसन , सवमिसन लाई लगायतका कामहरु भइरहेको छ । धेरै जलविद्युतका स्रोतहरु निर्माणधीन र कतिपय उत्पादन दिने तयारीमा छन । यसकारण मैले एउटा सिष्टम मात्र बसालेको मात्र हो ।यसमा मन्त्रालयका नीतिगत निर्णयदेखि प्राधिकरणका बिषयलाईने प्राथमिकतामा राखेर सफल भएको हो । मैले एउटा दायित्व निर्वाह गरे । यसको मुल्यांकन मैले भन्दा जनताले गर्ने हो । तर म यतिमा मात्र सिमीत छैन । सन्तुष्ट भएको छैन । अझै थुप्रै मेरा योजना पुरा हुननै बांँकी नै छन ।
तपाईले गर्न नसकेका योजनाहरु कति छन ?
यसमा आन्तरिक व्यवस्थापनले मात्र काम सम्पन्न हुन्नन । यसमा बाह्य विषयहरु पनि जोडिएका हुन्छ र मेरो कार्याकालमा धेरै मेहनत गर्दापनि अपर तामा कोशी ल्याउन सकिएन भएन । मैले सोचेर चाहँदा चाँहदै पनि सकिएन मेरो कार्याकालको ठूलो सपना थियो मेरो ड्रीम प्रोजेक्ट पुरा हुन् पाएन । तर कोभिडको कारणले पनि पर धकेलियो। अब यी प्रोजेक्टहरु अन्तिम चरणमा छन।यति छोटो समयमा सबै शुर भएका आयोजना समयमै सकिन्छन भन्ने हुदैनन । विभिन्न समस्या चुनौति आइपर्छन । कतिपय ट्रान्समिसन लाइन विस्तारको चरणमा कतिपय मुद्धा मामिलाका कुरा स्थानीयको अवरोध , रुखविरुवा कटान गर्ने बिषय देखि लिएर समस्या छन ।
त्यस्तै केही आन्तरिक सुधारका बिषयहरु सुधार्न खोज्यौं । यसलाई डिजिलाइटेसन सुधार्न गर्दैछौ ।यसको परीक्षण प्रयासमै छौं । यसलाई अटोमेटसन र डिजिलाइजेसनमा लाने चरणमा छ तर नतिजा आइपुगेको छैन । मेरो कार्याकालमा शुरु भएका प्लान्ट ६ महिनाअघिने सकिनुपर्ने अझै पुरा भएका छैन । विभिन्न प्रक्रियागत झण्झट पार गर्नु भएका ले अधुरा रहेका छन ।
अझैपनि जनताले प्रभावकारी काम भएन भन्ने गुनासा आएका छन ? र निर्यातलाई मात्र प्राथमिकता दिनुहुन्छ भन्ने आरोप पनि लाग्दै छ नि ?
अब अहिले विद्युत क्षमतामा विस्तार भइरहेको छ । उत्पादन बढ्दैछ । तर उत्पादनको तुलनामा खपत कम हुदैछ । तर हामीले विद्युत खपतका सामाग्रीलाई पनि बढाउंँदै लग्नुपर्छ । जसअनुसार यसका लागि इलेक्ट्रीक भेहिकल प्रयोग बढ्दै गएको छ । बजारमा इन्डक्टसन चुलोका प्रर्वद्धन गर्ने बिषयमा हामीले अभियान चलाएका छौं।
बिजली महसुल दर घटेको छ । अर्कोकुरा विद्युत स्टोरेज गर्ने सकिदैन त्यसकारण निर्यात गर्नैपर्छ । आत्म निर्भर बन्न निर्यात गर्नै पर्छ । त्यसैले खेर गएको विजुली प्रयोगमा ल्याउन पनि निर्यात अपरिहार्य हो ।अधिकांश रातको समयमा विजुली प्रयोगमा आउंँदैन । यसलाई सन्तुलनमा ल्याउन पनि निर्यात गर्न आवश्यक छ । अहिले हाम्रो पन्ध्रसय मेघावाट विद्युत निर्यात गर्न तयार भइसकेका छों । अब अटोमेटसन। डिजिटलाइजेसन सिष्टम भएपछि यस क्षेत्रले थप फड्को मार्नेछ ।
आम जनताले तपाईको फेरी पुर्नवहाली चाहेका छन । यसमा तपाई के भन्नुहुन्छ ?
सधैभरी एउटै व्यक्ति एउटै पदमा रहन्छ भन्ने हुदैन । समय सकिएपछि अवकाश प्राप्त हुने नियमित प्रक्रिया नै हो । मेरो विकल्प हुदैन भन्नेपनि हुदैन । तर जुन हिसाबले मैले मेरो कार्याकालमा जति गर्न सक्षम भए । त्यसलाई सबै जनताले मेरो कार्यशैली मन पराइदिनुभयो । म प्रशंसाको पात्र भए ।
तर प्राधिकरणमा म जस्तै नेतृत्व क्षमता राख्नुहुने अन्य अधिकृतहरुपनि हुनुहुन्छ । जो आएपनि सिष्टम र व्यवस्थापनलाई फलो गर्ने हो । छोटो समयमा मैले चाहेका सबै काम पुरा हुन सकेनन भन्ने मलाई चिन्ता हो ।ममा अझपनि विद्युतको क्षेत्रमा काम गर्ने उर्जा अझै मरेको छैन । यदि सरकारले चाह्यो र आवश्यक पर्यो भने मैले सरकारले दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्छु । मेरा अधुरा योजना सम्पन्न गर्नेछु र छिटैनै देशलाई प्रशस्त विद्युत निर्यातका ढोका खोल्नेछु भन्ने लागेको छ । आखिर मैले चाहेर मात्रै हुदैन भोलिका कुरा के हुन्छ हेरौं ।
२०७७ साल जेठ ३ गते शनिबारको राशिफल !पद्नुहोस
यी नै थिए प्रहरी जवान राम बहादुर साउद जस्को बी’भ’त्स ह’त्या गरियो !
तपाइका यस्ता ९ बानीले किड्नी फेल गराउन सक्छ !
जापानले बनायो कोरोना परिक्षणको नयाँ विधि, २५ मिनेटमै नतिजा आउने
९५ वर्षीया दृष्टिविहीन वृद्धाको घरको भुइँ र भित्ता भत्काएर खानेपानीको पाइप